टिप्स | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "टिप्स" जीवन अमूल्य छ, लापरबाही नगरौं …………….. किनकि ? ६० वर्ष उमेर अगाडि ९० लाखको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुन्छ सन् २००८ मा नसर्ने रोगका कारण ३ करोड ६० लाखको मृत्यु भयो सन् २००८ मा ७६ लाखको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो विश्वभरी मधुमेहका करिब ३४ करोड ७० लाख रोगी छन् विश्वभरी २ करोड ३५ [...]
धूमपान त्याग्ने उपाय धूमपान त्याग्न सर्वप्रथम मानसिक रुपले तयार हुनुहोस् । विश्वाससहित प्रकृतिको रहस्य ( यदि भगवान मान्नुहुन्छ भने भगवानलाई ) सम्झेर चुरोट छोड्ने प्रण गर्नुहोस् र यस कार्यमा लागि आवश्यक आत्मबल प्राप्त गर्न प्रार्थना गर्नोस् । चुरोट छोड्ने कार्यमा दृढता र आत्मबल जुटाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । एउटा तिथि निश्चित गर्नुहोस् र त्यो दिन [...]
चुरोट खानेले नखानेलाई मार्दै छन् ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ स्मोकिङ्का १० तथ्य सेकेन्ड ह्याण्ड स्मोकिङ् भनेको त्यो धुँवा हो जुन अरूले चुरोट सल्काएपछि वातावरणमा फैैलिन्छ र सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई पनि त्यत्तिकै असर गर्छ । विश्व स्वास्थ संगठनको सूर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिकोे धारा ८ अनुसार धूमपानको धुँवाको कुनै सुरक्षित मात्रा छैन । सय प्रतिशत धुँवामुक्त वातावरण मात्र जनतालाई सेकेन्ड ह्यान्ड [...]
कोलेस्टेरोल घटाउने सूत्र शाकाहारी खानामा कोलेस्टेरोलको मात्रा अति कम हुन्छ । त्यसैले अत्याधिक कोलेस्टेरोल र स्याचुरेटेड फ्याट ( गाढा बोसो ) भएका खाद्यपदार्थ मासु, कलेजो, मिर्गौला, अण्डाको भित्री भाग, दूध, घीेउ, मख्खन कम उपयोग गर्ने । रातो मासु कम खाने । मासु पकाउँदा छाला र बोसो फाल्ने । मासुमा पाइने प्रोटिनको बदला दाल, भटमास, सिमी, मटर आदि खाने [...]
भियाग्रा प्रभावहीन बिश्वभर धेरै मानिस यौन क्षमता बढाउन भियाग्रा प्रयोग गर्छन् । तर भियाग्रा कति प्रभावकारी र सुरक्षित छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । केही समयअघि भएको एउटा अध्ययनले भियाग्राले आधा भन्दा बढी प्रयोगकर्तामा यौन क्षमता बढाउन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बेलायती यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. जेफेरी ह्वाकेटले गरेको अध्ययनले भियाग्राको प्रभावकारिता [...]
मदिरा लतको खास कारण मदिराको लतले मति र गति विगारेका व्यक्ति ठाउँठाउँ भेटिन्छन् । कोही मानिस यस्ता हुन्छन् जो मदिराका लागि सम्पत्ति मात्र होइन, परिवारसमेत त्याग्न पछि पर्दैनन् । कोही कामलाई भन्दा बढी मदिरा र अन्य मोजमस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । कोही त मदिरा नखाई काम नै गर्न सक्दैनन् । कोही जति मदिरा खाए पनि सकुशल हुन्छन् भने कोही एक [...]
अल्ट्रासाउण्ड गर्दै हुनुहुन्छ ? अल्ट्रासाउण्ड स्क्यानिङलाई सानोग्राफी पनि भनिन्छ । यसको प्रयोग शरीरको भित्री भागको परीक्षणकालागि गरिन्छ । शरीरको भित्री भागको स्क्यानिङकालागि यसमा बिशेष प्रकारको ध्वनिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई मानिसले सुन्न सक्दैन । यसलाई भिडियो एक्सरे पनि भनिन्छ । शरीरमा ध्वनि प्रवेश भएपछि केही तरंग स्क्यानिङ गर्नुपर्ने अंगमा ठोक्किएर फर्किएर आउँछ । फर्केर आउने ध्वनिलाई अल्ट्रासाउण्ड मेसीनद्वारा [...]
जानौँ सुत्केरी हुने मिति मानिस मात्र होइन सबै प्राणीको बच्चा जन्मने दिन निश्चित हुन्छ । कारणवश केही अघि पछि भए पनि प्रायः निश्चित दिन वा त्यसको एक दुई दिन भित्रमा नै बच्चाले जन्म लिन्छ । आमाको पेटमा मानिस बढीमा १० महिनासम्म मात्र बस्छ भनिन्छ । मान्छेको गर्भ अवधि महिनाले गन्दा १० महिनाको भए तापनि दिन गन्तीका हिसाबले नौ महिना [...]
खुट्टा भए जुत्ता कति कति ! हरेक महिलाको चाहना आकर्षक र खिरिला खुट्टा हुन् भन्ने हुन्छ । शरीरको बोझ पनि धान्ने हुनाले खुट्टा चाँडै थकित हुन्छ । त्यसका लागि ताजा फलफूल खानु राम्रो हुन्छ । यसका लागि स्ट्रवेरी, काँक्रो, मुला जस्ता पानी बढी पाइने फलफुल राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै खुट्टाको सुन्दरताकालागि बढी पानी पिउनु पनि उत्तम मानिन्छ । सुन्दर खुट्टाकालागि [...]
सुत्केरी पछि सेक्स कहिले ? चिकित्सकले गर्भावस्थामा सेक्स नगर्न सल्लाह दिन्छन् । पुरुषहरू भने सुत्केरीपश्चात् तुरुन्तै सेक्स गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्छन् । सुत्केरीपश्चात् तुरुन्तै सेक्स गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ । महिलालाई सुत्केरी हुनु अगाडि र सुत्केरी भएश्चात एउटै प्रकारको यौन सुख नमिल्न सक्छ । सुत्केरी अवस्था महिलाकालागि अत्यन्तै कष्टकर अवस्था हो । यो समयमा यौनाङ्गका मांशपेशी [...]
Older posts Recent Posts	डा. भारत रावत पुनः गैरकानुनी अभ्यासमा
वयोधाका डाक्टर गैरकानुनी अभ्यासमा
जनस्वास्थ्य प्रमुख माथि लगाईएको यौन दुव्र्यवहारको आरोप झुटो सावीत
Homepageहेर, डाक्टरी विद्यार्थीको विजोग !डाक्टर साहेब, कहाँ गयो इथिक्स ?लापरवाहि गर्ने चिकित्सकलाई अदालतको कारवाहिकाउन्सिलमा पास विशेषज्ञ डाक्टरको नामावलीडा. कोइरालाको राजीनामाको थप रहस्यबिरामीको ब्यापार गर्न पाइँदैनहेल्थ अवार्डन्याम्सको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिकस्वास्थ्यले असमानता बढाएको छ : गगन थापा